Olee otú Naghachi Data si formatted nkebi n
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si formatted nkebi
Enwere m ike Naghachi faịlụ site formatted nkebi?
M nwere Seagate mpụga ike mbanye. Nke a ụtụtụ na m ụmụaka mmadụ na mberede formatted a nkebi na ya. Ugbu a nkebi bụ efu na faịlụ niile na ya na-arahụ. M na-adịghị ihe ọ bụla ndabere nke ha. Ya mere, m ajụjụ bụ nke na-e a ngwọta maka m ka m ga-esi m faịlụ azụ?
N'ihi na ọrụ, mberede formatting nke nkebi pụrụ ịbụ n'ezie ọdachi. Dị nnọọ ka ikpe n'elu, ị maa faịlụ niile na gị formatted nkebi na-okụrede. Ma nke ahụ abụghị n'ezie eziokwu. Files ka na na na nkebi, ị dị nnọọ ike ịnweta ha. Ha ga-okụrede na-adịgide adịgide nanị mgbe ọhụrụ data na gị nkebi-edochi ha. Nke a pụtara na ị pụrụ ikekwe naghachi data si formatted nkebi ọ bụrụ na ị kpọfere faịlụ ka na nkebi ma.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a formatted nkebi data mgbake na-enyere gị iji naghachi fọrọ nke nta niile furu efu faịlụ site na gị formatted nkebi. Ọ na-akwado mgbake nke dị iche iche faịlụ na ụdị, gụnyere foto, vidiyo, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ, wdg Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows na Mac kọmputa, nakwa dị ka mpụga ike mbanye.
Get a ikpe mbipute nke usoro ihe omume iji weghachite data si formatted nkebi ugbu a.
Igosi formatted nkebi Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Tupu anyị amalite, biko jide n'aka na ị na-agaghị enwe ike iji wụnye ihe omume na formatted nkebi.
Ugbu a, ka na-agbalị na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Mac ọrụ pụrụ ịgbaso yiri arụmọrụ na na na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi data si formatted nkebi
Dị ka oyiyi n'okpuru ngosipụta, ị nwere ike nweta 3 mgbake ụdịdị mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume. Biko gụọ ntụziaka nlezianya mara nkọwa ndị ọzọ banyere ha.
Ebe a, ị nwere ike họrọ "nkebi Naghachi" naghachi dum formatted nkebi faịlụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi formatted nkebi
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosi niile ike draịva na kọmputa gị, na ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu na gị formatted nkebi dabeere na na pịa "Ekem" ịnọgide.
Partitions na scanned ike mbanye ga-egosipụta na window. Biko họrọ formatted nkebi na iti on "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu furu efu data.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na formatted nkebi
All recoverable data ga-egosipụta na "File iche" na "nchekwa" na omume window mgbe scanning. Ị nwere ike ele faịlụ aha ego otú ọtụtụ gị furu efu faịlụ nwere ike agbapụtawo.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara faịlụ ị bụ banyere naghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ ka formatted nkebi n'oge mgbake.